हाँस्यकलाकार मनोज गजुरेल पीडामा ! श्रीमतीले गरिन् डिभोर्स::Hamrodamak.com
हाँस्यकलाकार मनोज गजुरेल पीडामा ! श्रीमतीले गरिन् डिभोर्स
काठमाडौं,५ माघ / हाँस्यकलाकार मनोज गजुरलको २१ वर्षे वैवाहिक जीवन दुःखद् भएको छ । सारालाई हसाएर मनोरञ्जन प्रदान गर्ने मनोज र श्रीमती मिनाबीच सम्बन्ध विच्छेद (डिभोर्स) भएको हो ।
उनीहरुबीच तीन हप्ता अघि सम्बन्ध विच्छेद भएपनि यसबारेमा दुवैजनाले केही बताउन चाहेका छैनन् । मनोज र मिनाले २०५३ सालमा आफ्नो प्रेम सम्बन्धलाई वैवाहिक जीवनमा बदलेका थिए । तर, हाल उनीहरु डिभोर्स गरेर एक्ला एक्लै जीवन बिताउने बाटोमा हिँडेका हुन् ।
पारिवारिक सहमतिमै केही समयअघि देखिएको असमझदारीलाई अन्त्य गर्दै मनोज र मिनाले सम्बन्ध विच्छेद गरेका स्रोतले जनायो । सम्बन्ध विच्छेद् पश्चात मनोज छोरासँग बालकोटमा बसेका छन् भने मिना छोरीसँग बानेश्वरमा बसेकी बताइएको छ ।